Ciyaaraha ugu fiican ee lagu ciyaaro Zoom oo lala yeesho qoyska iyo asxaabta 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Xilligan kala fogaynta bulshada ay sabab u tahay Covid-19 dhamaanteen waxaan adeegsanaa tikniyoolajiyadda la diyaariyey si loogu qabto shirarka fiidiyaha iyo shirarka qadka, sida DiiradaSi kastaba ha noqotee, wicitaanada fiidiyowga waxay sidoo kale noqon karaan fursad lagu raaxeysto, abaabulka kulanno khadka tooska ah saaxiibbada iyo qoyska.
Marka halkan waxaan kuugu soo bandhigeynaa xulashooyin aad u fudud oo aad ku ciyaarto. Diirada (ama Kulan ama barnaamij kale oo wicitaan fiidiyoow ah), adigoon soo dejisanayn softiweer ama barnaamijyo, laakiin si fudud adoo la xiriiraya asxaabta iyo qoyska, adoo adeegsanaya astaamo bilaash ah oo waxtar leh oo madalku ka dhigayo mid la heli karo isla markaana looga tegayo qolka hal-abuurkaaga iyo male-awaalka, si laguu siiyo saacado nasasho iyo qosol. Si aad uga jawaabto adigoon is dulsaarin oo aad ka dhigto wax walba xitaa xiiso badan, taladu waa in la doorto in yar calaamadaha dhawaaqa u dhaqma sida botones.
AKHRISO: Ciyaaraha ciyaartoy badan
Imtixaanka caadiga ah
Xilliga aad wadaagi karto bandhig ka socda kombiyuutarkaaga, waxaad sidoo kale marti gelin kartaa a baaritaanka si fudud, iyadoo laga faa'iideysanayo in dad badan lala gaaro isla waqti isku mid ah. Waa suurtagal in lagu dhiirrigeliyo tartamada telefishanka sida "Yaa doonaya inuu noqdo milyaneer" O "Dhaxalka" oo kaqeyb gal dad badan oo kooxo kala duwan ah si ay u wada baashaalaan. Marka, ha ka baqin inaad si weyn u fikirto oo aad hal-abuur yeesho!
Waa suurtagal in la sii wado abuurista kediska warqad iyo qalimaan, laakiin haddii aad doorbido wax dijitaal ah, Kahoot ayaa kuu iman kara Kahoot waxay u oggolaaneysaa, xaqiiqda, inay abuurto soo bandhig su'aalo badan oo xulasho ah, oo qof walba uu la wadaago mareegtooda internetka oo uu maareeyo dhammaan maamulayaasha markay tahay codeynta iyo tirinta dhibcaha. Qorshaha bilaashka ah wuxuu kuu oggolaanayaa inaad wadaagto foomka su'aalaha Kahoot leh ilaa 10 qof isla waqti isku mid ah, oo leh ikhtiyaarro shaqsiyadeed oo waqtiyada iyo dhibcaha ah.
AKHRISO: Ciyaaraha ugu fiican ee su'aalaha leh (Android iyo iPhone)
Ciyaartan ayaa aragta laba kooxood oo ku tartamaya shabakad internet oo wadaag ah oo ereyo laga buuxiyo ujeedkaaguna waa inaad u nadiifiso ereyada kooxdaada sida ugu dhakhsaha badan. Koox kastaa waxay magacawdaa a "horjooge" yaa leh hawsha inuu tilmaamo siiyo asxaabtiisa si uu u qiyaaso ereyada ugu badan ee suurtogalka ah: tusaale ahaan erayga "maalin" waxay tilmaan u noqon lahayd ereyga labadaba "waqti" in eray ahaan "iftiin". Sida iska cad, ereyada badan ee aad ku qorto tilmaamo yar, sida ugu dhakhsaha badan ayuu guddiga u sifeeyaa oo ay u weynaataa fursadaha guusha.
Tani waa ciyaar aad u fiican oo waliba dadka u oggolaaneysa inay istaagaan oo ay wareegaan sidoo kalena la shaqeeyaan koox ay ku sugan yihiin dad badan agagaarka laptop kasta ama webcam kasta. Waxaa macquul ah in ugaadhsiga ugaarsiga loo sii dheereeyo oo ka sii dhib badan yahay ama ka gaaban oo ka fudud iyadoo ujeedadu tahay ururinta alaabooyin gaar ah, ama waxyaabo buuxinaya shuruudaha qaarkood, guriga oo dhan. Si loo adkeeyo tartanka u dhexeeya ciyaartoyda kala duwan, waxaa suurtagal ah in lagu daro ama laga jaro dhibcaha iyadoo loo eegayo xawaaraha iyo hal-abuurka kaqeybgalayaasha ee xulashada walxaha. Guri wanaag wuxuu leeyahay liis adag oo fikradaha muhiimka ah si aad u bilowdo.
Dhamaan sabuuradda ee Diirada, laga helay qaybta share, waxaad ka ciyaari kartaa nooca muuqaalka ah Qaamuus: markiisa, kaqeybgale kasta oo ciyaarta katirsan wuxuu la wadaagi doonaa gudigiisa kuwa kale wuxuuna bilaabi doonaa inuu sawiro. Waad dooran kartaa oo aad habeyn kartaa midabyo kala duwan, cabirka burushka iyo waxyaabo kale oo badan si aad sawirkaaga uga dhigto mid gaar ah oo macquul ah.
Ka-qaybgalaha ugu horreeya ee qiyaasa waxa ay sawirayaan ayaa heli doona barta!
Ku dhowaad qof walbaa wuxuu leeyahay a Monopoly: sidaan horay u aragnay ee loogu talagalay chessXaaladdan oo kale sidoo kale, waxa kaliya ee lagaa rabo inaad sameyso waa inaad isku hagaajiso, abuurista meel uu kombuyuutarku ku noqdo waayo-aragnimo iyo ciyaar la wadaago. Waxaad u baahan doontaa laba ama in ka badan oo bankiyeyaal ah, midna koox walba. Diirada, yaa sidoo kale hubin doona inaysan jirin dad isku dayaya inay khiyaaneeyaan iyo in macaamilkan fog ee ka dhexeeya ciyaartoyda uu shaqeeyo.
Ciyaarta, sida iska cad, waa inay ka dhacdaa looxyada koox kasta dhaqdhaqaaqa cowska iyo dhismaha guryaha iyo hoteelada. Waa run in waraaqaha qaar, sida dhacdooyin lama filaan ah mi Fursada Waa la badin doonaa isla markaana qaybo ka mid ah ciyaartu haba yaraatee ma shaqeyn doonaan, laakiin muhiimadu waa in lagu raaxeysto la shaqeynta iyo ciidaha lala qaato kuwa aad jeceshahay xitaa kuwa ka fog
AKHRISO: Ciyaaraha guddiga iyo qolka qolka internetka: halista, kaligood-tashiga iyo kuwa kale
Kulankaan wuxuu ubaahan yahay dhamaan ciyaartoyda inay heystaan Wikipedia ku fur qalab kasta, ha noqdo laptop, kiniin ama taleefan. Ciyaartoyda oo dhami waa inay lahaadaan isla bogga bilowga iyo dhamaadka - qofka midba midka kale uga dhaqaaqo waqtiga ugu yar waa guuleystaha. Xeerka furaha ahi waa inaad ku dhex wareegi karto oo keliya encyclopedia adigoo gujinaya ama taabanaya xiriidhada Wikipedia, sidaa darteed ciyaartoydu waxay u baahan yihiin inay si caqli leh uga fikiraan isku xirnaanta ay go'aansanayaan inay raacaan.
Ciyaartan, mala-awaalku waa wax walba ... waxa loo baahan yahay in lagu raaxeysto! Ka-qaybgale kasta, markiisa, waa inuu isku dayaa inuu ka dhigo kuwa kale inay u maleeyaan shay, dabeecad, xayawaan si fudud mimandoli. Xadka kaliya waa mala-awaalkaaga! Waxaad sidoo kale ka fekeri kartaa inaad u rogto ciyaartan nooc. filim, sidaas darteed ku dayanaya cinwaanada filimada shineemooyinka, oo xitaa ka kooban dhowr erey. Xaaladdan oo kale, ka hor intaadan bilaabin ku dayashada filimka, waxaa lagama maarmaan ah in la muujiyo tirada ereyada ee ka kooban cinwaanka ka dibna… loolanka adag!
Ciyaar kale oo xiiso leh oo la soo jeedinayo Diirada es Qiyaas heesta, nooc ka mid ah Sarabanda Khadka tooska ah ee sababi doona madadaalo iyo tartan. Ujeeddada halkan waa in laga faa'iideysto hawsha wadaagga muusikada ee la dhaqaajin karo adigoo gujinaya astaanta share ka dib u gudub qeybta Heer sare iyo xulashada maqaalka La wadaag kaliya codka kumbuyuutarka. Waqtigaas, codka ka socda kumbuyuutarka qof kasta oo loo xilsaaray inuu doorto heesta si uu u qiyaaso waxaa lala wadaagi doonaa dadka kale oo dhan. Waxay noqon doontaa mid ku filan, sidaa darteed, in la bilaabo heesta iyo ... sug midka ugu horeeya ee awooda inuu siiyo jawaabta saxda ah ee loolanka weyn ee aqoonta iyo falcelinta muusikada.
Haddii aad doorbideyso wax yar oo aamusan, the chess waa ciyaar fudud oo la tuuro Diirada. Hubaal, waxaad ku ciyaari kartaa chess-ka khadka tooska ah ama farriin kasta ha noqotee, laakiin inaad waqti la hadasho qof aad jeceshahay oo fog oo ka badan shaashadda ayaa kaa dhigeysa inaad dareento mid kuu dhow. Kaliya waa inaad xasuusnaataa inaad udhaqaajiso qaybaha labada loox si aad marwalba uhesho horumarka ciyaarta. Iyo kuwa ugu xiisaha badan, waa suurtagal in la ciyaaro dhowr maalmood: kaliya ka tag qaabeynta guddiga iyada oo dhammaan qaybaha meel ku yaalliin. Tani waxay sidoo kale ku siinaysaa wakhti aad ku qorshayso istiraatiijiyad guuleysata!
AKHRISO: Chess iyo marwada bilaash ah Android, iPhone iyo khadka tooska ah
Socdaalka - Socdaalka
Ku dhashay jimicsi ahaan shaqo kooxeed shaqaalaha fog ka shaqeeya, Socodka hadda waa loo heli karaa qof kasta oo doonaya inuu ku tijaabiyo bilaash.
Weriye ayaa hoggaamiya kooxda inteeda kale, oo loo qaybiyay kooxo tartamaya, la wadaagaya bogagga fursadda siinaya Xullo xiisahaaga- Waxaad u baahan doontaa inaad ku gaarto go'aannada kooxeed farriin deg deg ah oo aad dooratay si aad u hubiso in kooxdaadu ka badbaado habeenka oo ay ka baxdo dhibaatada.
ciyaaro Calaamadaha Wadahadalka fiidiyowga, waxaad ubaahantahay qol yar oo waxqabadka ah iyo iftiin fara badan si fiidiyowgu uusan u ahayn mid aad ucun. Ujeeddada ciyaarta ayaa ah in laga codsado bandhig faneedka inuu la yimaado fikrad oo uu masraxa ka dhigo si kooxda inteeda kale ay u maleeyaan. Kuwa kaqeyb gala wicitaanka fiidiyowga way daawan karaan, waqtiga raadraaci karaan, iyo inay hubiyaan in qish uusan dhicin. Hadday dhammaan kaqeybgalayaashu heystaan ​​kaarar badan Calaamadaha guriga xitaa waa ka fiican yahay.
AKHRISO: Ciyaar Bingo, sabuurad iyo soo saarista lambarka
Maqaallada kale waxaan sidoo kale ku aragnay:
10 kulan oo laba ah si loogu wada ciyaaro isla PC ama internetka (HTML5)
20 kulan oo bilaash ah oo lagu ciyaaro ciyaaraha khadka tooska ah lana ciyaaro saaxiibada
Videogiochi oo la socda Cloud Gaming di Stadia, Geforce Now, Playstation Now